I-Forex Slippage | Kuyini ukuthuthukiswa kwe-Slippage & Price | I-FXCC
I-Forex Slippage vs.
I-Forex slippage ichaziwe
I-Slippage, ngokwemigomo yokuhweba, ingahle ichazwe ngokuthi i-oda eligcwele ngentengo ehlukile kumanani ekuqaleni okucashunwe ku-platform yokuhweba. Kodwa-ke, ukuhlenga kufanele kubhekwe njengendlela ebonisa ukuthi imakethe kanye nokufinyeleleka kwemakethe ekhethiwe, isebenza ngokucacile nangendlela ephumelelayo.
Abahwebi bangathola imiyalo yabo igcwele izindlela ezintathu ezingenzeka; ngentengo eqondile ecashunwe, uhlangabezana nesichazamazwi esibi - lapho i-oda lakho ligcwaliswa ngenani elingathandeki, noma uthole isipiliyoni esihle - uma umyalelo ugcwaliswa ngentengo engcono kunamanani okucatshangwe ekuqaleni. Iqiniso lokuthi i-slippage ikhona kufanele empeleni ithathwe njengokuqiniswa okuhle ukuthi umthengisi uhlanganyela endaweni emakethe ephumelelayo kakhulu, enobulungisa futhi ebonakalayo. Ikakhulukazi ngokuqondene ne-ECN ngokuqondile ngokucubungula, kuzoba yinto engavamile kakhulu futhi isolisayo, uma imiyalo yabadayisi yayigcwele njalo intengo eqondile ecashunwe.
Ezimakethe ezinjenge-FX, ukuguqula cishe u-$ 5 trillion isonto ngalinye futhi ukwenza ukuhweba kwamakhulu ayizigidi ngosuku, kuyinto engokwemvelo nokulindela okunengqondo ukuthi akuwona wonke ama-oda angalinganiswa ngokuphelele endaweni enjalo. E-ECN ehamba kahle futhi ebonakalayo yokuhweba imvelo, echibini labahlinzeki bamakhemikhali banikeza izingcaphuno ze-FX, ukungazami kungashintsha ngokuzumayo futhi ngokuphawulekayo. Ngakho-ke, umyalelo uhambelana ncamashi ngentengo engcono kakhulu etholakalayo, ngezinye izikhathi ngentengo ecashunwe, noma okungenzeka ngentengo engcono kunalindelekile.
Iyini i-Positive Slippage?
I-slippage enhle iyaziwa nangokuthi ukuthuthukiswa kwentengo futhi kuyinto eyenzeka lapho intengo yesilinganiso isebenza khona kumthengisi.
Isibonelo, umhwebi ubeka umyalelo wokuthenga i-XYUMUMX lot ye-EUR / USD ngentengo yemakethe ye-1, umyalelo uthunyelwe nge-platform ye-MetaTrader kumnikezeli wesikweletu bese umyalezo wokuqinisekisa uphinda ubuya umthengisi ukuthi lo myalelo ibulawa ku-1.35050. Ngomthamo we-ECN / STP umhwebi uye wabhekana nesisindo esihle, baye bagcwaliswa ngentengo engcono, intengo ehambisana nomyalo wabo wokuqala.